निकाल निम्त्याउने सलह, एकै बथानमा आठ करोड फट्याङग्रा हुने ! – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /News/निकाल निम्त्याउने सलह, एकै बथानमा आठ करोड फट्याङग्रा हुने !
निकाल निम्त्याउने सलह, एकै बथानमा आठ करोड फट्याङग्रा हुने !
काठमाडौं । नेपालमा सलह फट्याङग्राले प्रवेश गरिसकेको छ । शनिबार बिहान पुर्वी तराईको विभिन्न सीमाबाट नेपालमा यो फट्याङग्राले प्रवेश गरेको हो ।
शनिबार बिहान सलह फट्याङग्रा नेपालको तराई भूभागमा प्रवेश गरेको कुार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको प्लाण्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमागाईका अनुसार यो फट्याङग्रा भैरहवा, पर्साको पर्सागढी गाउँपालिका, बाराको डुमरवाना र सर्लाहीको नवलपुरमा देखापरेको छ ।
केन्द्रले अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रका बिज्ञ कर्मचारीलाई खटाएर उच्च गुणस्तरको क्यामेराबाट यो फट्याङग्राको टाउको, पेट, एन्टीना, आकार(प्रकारको फोटा खिचेर कर्मचारीलाई पठाउन निर्देशन दिएको छ । यो फट्याङग्रा नेपालमा छिरेपछि केन्द्रले दिउँसो उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठक समेत डाकेको छ । यसअघि गत जेठ २४ गते सरकारले नेपालमा यो फट्याङग्रा नछिर्ने दाबी गरेको थियो ।
यो फट्याङग्राको एक बथान अफ्रिकाबाट खाडी मुलुक, इरान र पाकिस्तानहुँदै भारत छिरेको थियो । अर्को बथान हिन्द महासागर हुँदै भारतमा प्रवेश गरेको थियो । भारतको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, विहार, राजस्थानलगायतका स्थानमा एक महिनाअघि यो फट्याङग्राको बथान प्रवेश गरेको थियो ।
यो फट्याङग्राले सम्पूर्ण कृषि वालीको बोटविरुवा, बाली, फुल, डाँट, डाँटको बोक्रासम्म खाइदिने क्षमताका भएकाले प्रवेश गरेको स्थानमा ठूलो भोकमरी र अनिकाल हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।
सलह कराेडाैंकाे समूहमा उड्ने फट्याङग्रा प्रजातिको किरा हो। यसको पछाडिको खुट्टा मोटो हुन्छ। मरुभूमि क्षेत्रमा पाइने किरा भएकाले उच्च तापक्रम अर्थात् ४० देखि ४५ डिग्री सेल्सियससम्म बाँच्छ र यो तापक्रममै यो बढी सक्रिय हुन्छ। त्रिवि प्राणीशास्त्रका सहप्राध्यापक प्रेमबहादुर बुढाले भने, ‘२० डिग्रीभन्दा कम तापक्रम भयो भने याे सक्रिय हुँदैन।’
समूहमा बस्ने यो किराले साथीको नक्कल गर्ने गर्दछ। ‘एउटाले जे गर्‍यो अर्कोले त्यही गर्ने बानी हुन्छ। भेडाले अगुवाको नक्कल गरेजस्तै यसले पनि साथीको नक्कल गर्छ’, बुढाले भने। दिउँसो सक्रिय हुने सलह तापक्रम बढेमा राति पनि सक्रिय हुन्छ।
सलह पचासौं किलोमिटरसम्म लाममा उड्छ। ‘हावा जता जान्छ यो पनि त्यतै जान्छ। वयश्क सहलले एकै पटकमा सय दुई सय किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छ’ उनले भने। एउटा समूहले ३५ हजार मान्छेको खान्की खाइदिन सक्छ।
सलहले एकैपटक ६० देखि ८० वटा अण्डा पार्छ। जीवनकालमा यसले तीन पटकसम्म अण्डा पार्छ। अण्डाबाट निस्केको एक महिनादेखि वयश्क हुन्छ। ६० देखि ७० दिन भएपछि अण्डा पार्न थाल्छ।
यसको आयु चारदेखि पाँच महिनासम्मको हुन्छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार यसले दस दिनमा पाँच हजार किलोमिटरसम्म यात्रा गर्छ। यस्तै पाँचदेखि सात हजार फिटमाथिसम्म उडेको पुष्टि भएको विज्ञ बताउँछन्।
समुद्री छेउ, जहाँ यसको प्रकोप रहेको हुन्छ, त्यस्ता ठाउँमा आउने समुद्री आँधीले यसलाई परपरसम्म पुर्‍याइदिन्छ। एक किलोमिटरमा चारदेखि आठ करोडसम्म सलह हुन्छन्। एक किलोमिटरमा हुने सलहले ३५ हजार मान्छेको खान्की एकै दिनमा खाइदिने विज्ञ बताउँछन्। ‘यसले भए भरको सबै बाली ठुटै पारेर खाइदिन्छ,’ नेपाली भन्छन् ।
यसको सक्रियता जेठदेखि असोजसम्म देखिन्छ । तर जलवायु परिवर्तनका कारण मनसुनी समय परिवर्तन हुँदा यो किराको जीवनचक्र पनि फेरिँदै गएको छ। यसले मान्छे र जनावरलाई आक्रमण गरेको भेटिएको छैन। साथै, कुनै संक्रामक रोग पनि सार्दैन।
कसरी भइरहेको छ भूपेन्द्र बडुवाल हत्या प्रकरणको अनुसन्धान ? अझै पक्राउ परेनन् फरार नवीन
काठमाडौँ उपत्यकामा स्मार्ट लकडाउनको आदेश, आज मध्यराति १२ बजेदेखि लागू हुने
आज दिउसो करिब १ बजे तिर पृथ्वी ४ मिनेटका लागि अन्धकार हुने दावी